Samsung Gear S2 dia mahazo fanavaozana vaovao lehibe | Androidsis
Samsung miaraka amin'ny fanombohana ny Gear S2 nahatratra ny tanjona hisarika ny mpanjifa maro izay nitady ny smartwatch tonga lafatra ho an'ny fanaraha-maso. Natolotra efa-taona lasa izay, manao izany ny Koreana taorian'ny fandefasana azy tamin'ny faran'ny 2015 teo amin'ny 349 euro, noho izany dia hiantoka izany fa tsy ho lany andro amin'ny farany.
Ny fanoloran-tenan'ilay orinasa dia ny fanavaozana ireo finday avo lenta sy fitaovana hafa, anisan'izany izao ity famantaranandro fanta-daza malaza ity. Mahagaga ny rehetra izany, indrindra rehefa avy nangataka ela ny fanavaozana tamin'ny alàlan'ny forum ofisialin'ny orinasa Koreana.
Miaraka amin'ilay rindrambaiko vaovao, mihatsara ny traikefan'ny mpampiasa azo ampiasaina, tsy afaka mangataka zavatra be loatra isika satria ny lozisialy efa misy ho an'ny rehetra dia matotra be. Manoro hevitra ireo injeniera ny fanavaozana ny singa raha te-hivoaka ianao fampisehoana tsaratsara kokoa an'ny Samsung Gear S2 ary milanja 6,79 MB.
Raha ny filazan'ny changelog ofisialy, ny fanavaozana dia hanome fizakan-tena bebe kokoa an'ny Gear S2 ary mampihatra kaody fitoniana ho an'ny filaminana amin'ny fiambenana. Ankoatr'izay, ny interface dia iray amin'ireo zavatra manan-danja ary azo antoka fa io no ampiasain'ny Galaxy Watch Active 2.
Teboka iray hafa hanasongadinana ny fahaizana mamafa ny fampandrenesana rehetra miaraka amin'izay fa tsy ny tsirairay navela, zavatra mankaleo tokoa amin'ny fotoana anaovan'ny marina. Nihatsara ny hafainganam-pandehan'ny Samsung Gear S2 Mahavariana, ity dia manidy ny andiana fanavaozana lehibe aorian'ny fotoana nefa tsy mahazo.
Raha te hahalala raha manana an'ity fanovana farany ity ianao dia tsy maintsy hisokatra izahay ny fampiharana Galaxy Wearable amin'ny telefaona, ampidiro ny safidy Download ary apetraka amin'ny menio fanavaozana ny lozisialy Watch. Na eo aza ny fandefasana eran-tany dia halefa miandalana any amin'ny firenena samihafa izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Samsung Gear S2 dia mahazo fanavaozana vaovao lehibe
Samsung Galaxy 01 dia hanomboka hivarotra amin'ny 6 Febroary any Vietnam
Ny masontsivana momba ny taranaka vaovao an'ny Galaxy Buds dia voasivana: bateria bebe kokoa ary famahanana haingana